Bogga ugu weyn 20 Shaqooyin Oo 20 Saacadood Bixiya 2022 | Lacag Degdeg ah
Weligay fikrad kama haysto inta aan ka kasban karo buuq dhinac ah. Waxaan ogaaday in aan kasban karo xoogaa lacag caddaan ah markaan saaxiibkay la hadlayo. Aniguna waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaago akhrintaan ku saabsan shaqooyinka bixiya $ 20 saacaddii.
Waxaa jira shaqooyin dhowr ah oo aad ku kasban karto ugu badnaan 20 doollar saacad adiga oo aan lahayn khibrad ama shahaado yar. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad leedahay xirfadaha loo baahan yahay ama aad maal gasho shahaado ama koorso.
Sidoo kale, shaqooyinkan waxaa loo samayn karaa wakhti buuxa ama wakhti dhiman. Marka, haddii aad rabto dakhli kale oo leh jadwal dabacsan si aad u dejiso qoyskaaga ama mashaariicda kale, waxaad siin kartaa qaar ka mid ah shaqooyinkan tallaal.
Halkan waxaa ah shaxda waxa laga filayo:
20 Shaqooyin Oo Bixiya $ 20 Saacad 2022
#20 Socodka Eeyaha
#18 Cunto Kariyaha
#17 Nadiifinta Guriga
#16 Dejinta Dhulka
#14 Barashada Diyaarinta Imtixaanka
#13 Naqshadeynta Sawirka
#10 Gargaarka Shakhsiyeed
#9 Akhriska Cadaynta
# 8 Qoraal Bilaash ah
# 7 Sawir qaade
#6 Xad -gudubka
#5 Dukaameysiga Shakhsi ahaaneed
#4 Turjumaadda Luqadda Calaamadaha
#3 La -talinta Dharka
#2 Daaweynta Duugista
# 1 umeerin
Halkaan waxaa ah 20 shaqooyin lacag degdeg ah oo bixin kara ugu yaraan 20 doollar saacaddiiba:
Barashada Diyaarinta Imtixaanka
Turjumaadda Luqadda Dhagoolaha
La -talinta Dharka
Fiiro gaar ah: Mushaharka shaqooyinkan waa sida ka muuqata Shabakadda Shaqada.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 20 + / saac
Haddii aad jeceshahay eeyaha, markaa lacag lagu siiyo inaad ku socotid waxay noqon kartaa shaqo ku habboon. Waad madaxbannaan tahay ama waxaad la shaqayn kartaa shirkad eey lugeyneysa.
Halkan, milkiilayaashu waxay ku siin doonaan lacag si aad ugu lulato gurigooda oo aad u kaxaysato xayawaankooda. Kaliya banaanka u bax, jimicsi samee, waqti la qaado eeyaha qurxoon, dabcan, lacag qaado.
Waxaad ka bilaabi kartaa xayeysiis meelaha xayawaanka ee maxalliga ah, kuwa xanaaneeya, kuwa xadka leh, kuwa xayawaanka raaca, dukaamada xayawaanka, iyo wixii la mid ah.
Haddii aad jeceshahay cunto karinta dad aad u tiro badan oo aadan ka fikirin fiidkii shaqada iyo/ama dhammaadka toddobaadka, tani waa hab fiican oo lagu soo qaadan karo lacag badan oo dheeraad ah.
Sababta ayaa ah in raashin -qaadistu ay ka mid tahay shaqooyinkaas oo ku siin kara 20 doollar saacaddii. Bandhigyo wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan, waxaad hubtaa inaad heli doonto dalabyo badan.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 20- $ 45+/saac
Inaad noqoto cunto kariye shaqsiyeed waa hal shaqo oo aad kasban karto $ 20 saacaddii. Adigoo ah qof ku raaxaysanaya cunto karinta, waxaad ku bilaabi kartaa saaxiibbada iyo saaxiibbada saaxiibbada, oo waxaad ku dhisi kartaa sumcad-hadal.
XIDHIIDHKA: 10 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Lacag Laga Helo eBooks -ka 2022 -ka
Sidoo kale, samee jimicsiyo toddobaadle ah oo joogto ah ama u dubo raashin barafeeyaha si aad u badan si dadku u dalbadaan.
Khadka hoose, haddii aad ku fiican tahay dheriyada iyo digsiyada, markaa qabow, lacag caddaan ah ayaa adiga kuu taal.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 20+ saacaddii
Haddii aadan ka fikirin inaad gacmahaaga waxoogaa wasakh noqoto, halkan waxaa ah shaqo bixinaysa $ 20+ saacaddii - inaad noqoto nadiifiyaha guriga.
Markay qoysas badani isku dayaan inay ku mashquulaan xirfaddooda iyo nolosha qoyskooda, mar walba waxaa jiri doona baahi loo qabo kuwa nadiifiya oo hagaajiya guriga.
In kasta oo bilawga ay adkaan karto gaar ahaan helitaanka hoggaan shaqo iyo dhisidda macmiilka, goobaha sida Care.com ayaa wax badan ka dhigay.
Mareegtan waxay asal ahaan ku xidhaa dadka u baahan xoogaa cawin ah oo guriga agtiisa ah nadiifiyayaal raadinaya macaamiil.
Naqshadeynta dhulka waa hal shaqo oo ku siin karta $20 saacadii. Waxay ka kooban tahay waxyaabo badan oo kala duwan, laga bilaabo cawska jarista ilaa beeridda ubaxa, geedaha, iyo geedaha yaryar.
Markaa, haddii aad jeceshahay inaad gacmahaaga wasakhdid oo aad maalin ku qaadato shaqo jireed oo dibadda ah, tani adiga ayay kuu noqon kartaa.
Waxaad ku bilaabi kartaa gudahaaga riwaayado hal mar ah Craigslist, ka dibna isku day inaad dhisto sumcad eray-afka ah.
Sidoo kale, ogow waxaad samayn kartaa wax ka badan 20 doollar saacaddii haddii aad shaqayn karto mashiinno khaas ah. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ka taxaddartaa inaad hesho shatiyada iyo caymiska lagama maarmaanka ah gaar ahaan haddii aad bilowdo inaad tan ganacsi ku dhisto.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 20- $ 25 / hr
Haddii aad jeceshahay carruurta, markaa hubaal waad jeclaan doontaa inaad u shaqayso sidii ilmo xannaanayn ah. Waxaad shaqayn kartaa maalin kasta, dhammaadka toddobaadka, fiidkii, ama soo wacaha, magacow. Kaliya ogow in waalidiintu leeyihiin baahida oo aad jeebka ku shubato.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 21- $ 32 / hr
Inaad noqoto macalin udiyaar garowga imtixaanku waa shaqo kale oo aad kasban karto $20 saacadii. Waxaad bari kartaa ardayda isku diyaarinaysa SAT, ACT, MCAT, LSAT, GRE ama GMAT, iyo in ka badan.
Marka, iyada oo ku xidhan imtixaanka aad u qalantid inaad wax barato, tani waxay noqon kartaa hab fiican oo lagu sameeyo xoogaa lacag caddaan ah oo dheeraad ah.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 22 / hr
Naqshadeeye garaaf ahaan, waxaad hubtaa inaad kasban doonto xoogaa lacag caddaan ah haddii aad taqaan basashaada. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xirfado kombiyuutar oo aad u fiican iyo indho fiiqnaan xagga naqshadeynta. Isku soo wada duuboo, waa riwaayad weyn haddii aad heshid waxa ay qaadaneyso.
Marka hore, samee naftaada faylalka muunada shaqada, ka dibna hubi inaad haysato degel internet oo muujinaya. Sidoo kale, ku dar wixii talo bixin ah iyo faallooyin qiimo leh oo aad ku guulaysatay.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 23.50 / hr
XIDHIIDHKA: Sida Lacag Loogu Sameeyo Steam Sanadka 2022 | 10 Siyaabaha Sharciga ah
Dad badan ayaa baadi goobaya cidda ka dhigi doonta inay u ekaadaan munaasabad. Waxaad noqon kartaa farshaxan qurxiyo oo aad kasbato ugu yaraan 20 doollar saacaddii.
Waxaad heli doontaa aroosyada iyo kuwa xiisaha leh iyo kuwa ka qeyb galaya xafladda weyn oo waliba ku raaxeysta inta aad shaqeyneyso.
Kaliya ogow ilaa intaad kufiican tahay waxaad qabato, waad sii wadan doontaa heesaha!
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 23.71 / hr
Waxaad samayn kartaa xoogaa doolar qabow saacaddii intaad ka turjumeyso luuqad kale.
Tani waxay noqon kartaa hab fiican oo aad ku samayn karto xoogaa lacag ah oo fudud gaar ahaan haddii aad tahay laba-luqadood ama laba-luqadood. Tani waa sababta oo ah dadku waxay raadinayaan qof u gudbin kara macluumaadka si ay u fahmaan.
Waxaad ku shaqayn kartaa si ku-wicitaan ah ama adigoo samaynaya riwaayado istaadier ah.
Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan shaqadan ayaa ah in marka aad si fiican wax u qabato ay dadku mar walba ku soo wacayaan.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 25 / hr
Haddii aad aad u abaabulan tahay oo aadan ka fikirin inaad saadka iyo shaqooyinka u qabato qof kale oo aad lacag qaadato, markaa waxaad tixgelin kartaa inaad noqoto kaaliye shaqsiyeed.
Caawinta shakhsi ahaaneed runtii waa riwaayad weyn oo faa'iido badan gaar ahaan haddii aad mas'uul tahay, kala go'antahay, oo lagu kalsoonaan karo.
#9 Akhrinta Cadeynta
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 26 / hr
Akhriska caddayntu waa hal shaqo oo aad lacag fiican ka heli karto. Dib-u-akhris ahaan, waa inaad u hubisaa nuxurka qoran inay yihiin naxwe, qoraal-qoraal, syntax, higaad, xarakayn, iyo khaladaad qaabaynta.
Marka, haddii aad jadwalka ku sawiri karto hurdadaada, dareen xoog leh ka qabo koomaha Oxford, oo aad raadineyso hab aad lacag uga hesho guriga (ama meel kasta oo adduunka ah), dib -u -akhrintu waxay noqon kartaa shaqadaada.
Ahaanshaha qoraa madax -bannaan waa mid ka mid ah siyaabaha lagu helo 20 doollar saacaddii shaqada.
Qorayaasha madax-bannaanidu waxay wax ka qoraan wax kasta iyo wax kasta oo loogu talagalay daabacado kala duwan oo ay ku jiraan mareegaha, baloogyada, joornaalada, iyo wargeysyada. Qora madax-bannaan sidoo kale waa la siin karaa si uu u qoro (ama ghostwrite) buugaag.
Markaa, waxaad go'aansan kartaa inaad ka dhigto qoritaan madaxbanaan shaqo waqti-buuxa ah, ama waxaad ka faa'iideysan kartaa magdhowga wanaagsan iyo dabacsanaanta oo aad u adeegsan kartaa sida gig-time-time.
Waxaad ku geli kartaa internetka goobaha sida www.upwork.com or Fiverr si aad u xayeysiiso kartidaada. Waxaan qiyaasayaa inaad la yaabi doonto inta dadku diyaar u yihiin inay bixiyaan.
Sidoo kale, waxaad ku bilaabi kartaa goobo bixiya boostada haddii aad u baahan tahay xoogaa dhiirrigelin asaasi ah.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 26/hr-
Iyadoo aan loo eegin aaminsanaanta in qof kastaa uu yahay sawir qaade mahadnaqa casriga ah ee jeebkeena, sawir-qaadista ayaa weli ah qaab farshaxan oo dadku ku bixin doonaan lacag fiican.
XIDHIIDHKA: 25 Xarunta Ugu Mushaarka Badan NFL | Dalalka Ugu Fiican
Marka, haddii aad taqaanid sida loo qaado sawirro xirfadeed oo tayo sare leh, waxaa jira suuq loogu talagalay kartidaada.
Celceliska Mushaharka Shaqada: $ 26/saac (oo lagu daray talooyin)
Bartending waa shaqo kale oo ku siin karta $20 saacadii. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad u baahato shahaado gobolkaaga iyo xaqiiqdii, xirfadaha samaynta cocktails ama shubista tallaalada iyo biirka si aad u shaqeyso.
Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo aad sameyso, waxaad sameyn kartaa tan lacag ah haddii aad hesho meesha saxda ah oo aad ku garaacdo jadwalka saxda ah.
Kaliya bilow wax yar oo samee hab tartiib tartiib ah.
Celceliska Mushaharka Shaqada: ilaa $ 33/saac
Haddii aad leedahay asal hufan xagga moodada iyo il aad u weyn oo qaab -dhismeedka ah, markaa tixgeli inaad tahay dukaameeye shaqsiyeed dadka kale.
Waxaad u qaadan kartaa sidii shaqo waqti-buuxa ah ama riwaayad waqti-dhiman ah. Mid kasta oo aad doorato, waxaad hubaal ka dhigi doontaa lacag fiican oo laga yaabo inaad waqti fiican ku yeelato sameynta.
Celceliska Mushaharka Shaqada:$ 36.50 / hr
Waxaad ku kasban kartaa in ka badan $ 20 kaliya shaqada turjumaadda luqadda dhegoolaha.
Waa run sidaad u akhriday. Haddii aad taqaanno Luqadda Calaamadda Ameerika (ASL) ama luqad kale oo calaamado, waxaad ka shaqayn kartaa tarjumaadda goobaha dhacdooyinka, qolalka maxkamadda, ama fasallada.
Waxa kale oo aad ka shaqayn kartaa xataa goobo yaryar sida dhexdhexaadinta iyo shirarka.
Celceliska Mushaharka Shaqada:: $ 50- $ 500/saac
La-talinta Dharka waa mid ka mid ah riwaayadaha aadka u sarreeya ee aadka loo bixiyo. Marka, haddii aad leedahay il heer sare ah oo moodada ah oo aad dacwad ku soo oogi karto macaamiisha dhamaadka sare ah, waxaa laga yaabaa inay adiga kuu tahay.
Adeegsiga qalab gaar ah; "Gacmaha sixirka" ?? iyo "taabasho sixir" ??; daaweeyayaasha duugista ayaa dadka ka caawiya inay dareemaan fiicnaan.
Haddii aad haysato gacmo xoog leh oo aad rabto inaad dadka caawiso, markaa naftaada u qaado liisanka Daaweynta Duugista ee Shahaadada leh oo bilow inaad cajiinka gasho.
Waxaad ku shaqayn kartaa kaligaa ama naadiyada caafimaadka, istuudiyaha duugista, iyo isbaarooyinka.
Celceliska Mushaharka Shaqada:
Celceliska Mushaharka Shaqada: ilaa $ 75/saac
Halkan waxaad la shaqayn doontaa ardayda oo ka caawin doontaa inay waxqabad heer sare ah ka dhigaan xagga tacliinta. Waxaad ku bari kartaa ardayda maadooyin iyo aagag kala duwan.
Waad iska xoqin kartaa sayniskaaga iyo xisaabtaada, waxaad ku takhasusi kartaa maaddooyinka ugu khiyaanada badan, waxaadna samayn kartaa lacag aad u badan. Sidoo kale, waxaad ku caawin kartaa erayada iyo diyaarinta imtixaanka oo aad si fiican uga hesho $ 20/saac.
Waxaad bilaabi kartaa sameynta lacag dhaqso leh xirfadahaaga maanta!
Si taxaddar leh ugu gudub shaqooyinka kor ku xusan oo u gudub waxa adiga kugu habboon.
35 Sure Waddada loo sameeyo 200 Doolar Maalin kasta
20 Lacag Ka Samee Shaqooyinka Miiska hoostiisa
40 Siyaabood oo si dhakhso leh loogu sameeyo 500 oo doolar Ka dib Faafida Covid19
Shaqooyinka Bixinta Degdegga ah ee 18-jirka
14 Shaqooyinka Qoraalka oo Si Fiican U Bixiya
Mushahar Ma Lagu Siiyaa Eeyaha Koriya? 10ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Lacag Looga Sameeyo Eeyaha Sanadka 2022
Safemoon Crypto: Waa maxay oo ay tahay inaad maalgashato?
Halkee Ayaan Ku Iibin Kaarboorka Sanadkan | Lacag Caan ah
Mar kasta oo alaab cusub la soo iibiyo, kartoonnada kartoonnada ayaa la diyaariyaa. Su’aashu hadda waxay tahay maxaan...
Hanti-guurayaal ma sameeyaan lacag aad u badan? Imisa ayay qaataan? Arrintan ayaa waxaa la weydiiyay…
10ka Apps ee ugu Wanaagsan Sida Instacart si aad lacag badan u samayso
Dadka intooda badan waxay isticmaali karaan xoogaa lacag caddaan ah oo dheeri ah, laakiin helidda habab ay lacag ku helaan dhinaca waxay noqon kartaa…
Shuruudaha VIPKid: Yaa u Qalma inuu Codsado VIPKid 2022?
Shaqooyinka fogfoggu waxa ay noqonayaan caado waayahan danbe. Ka shaqaynta meel fog waxay ku siinaysaa dheelitirnaan nololeed shaqo oo shaqo badan...
Ma u baahan tahay lacag biilasha? 17 Waddo Degdeg ah oo Lacag Caddaan ah Loogu Sameyn Karo 2022
Waqtiyadii dhawaa, odhaahda aan u baahanahay lacag asap waxay noqotay erey inta badan laga baadho intarneedka.…